जाडोमा यसरी न्यानो रहन डा. शाहको सुझाव
११ मंसिर २०७६, काठमाडौं जाडो याम शुरु भइसकेको छ। जाडोमा कसरी आफू सुरक्षित रहने? यो यत्तिबेलाको सबैको चासोको विषय हो। बिहान–बेलुका निकै चिसो बढ्न थालेको छ। यसरी दिन–प्रतिदिन जाडो यामको
भुलेर पनि नखुवाउनुहोस् नवजात शिशुलाई पानी
०९ मंसिर २०७६, काठमाडौं कतिपयः अभिभावकहरु आफ्नो बच्चालाई कुन उमेरमा पानी पिलाउन सुरु गर्ने हो? भन्ने कुरामा अन्यौल हुन सक्छन्। यदि त्यस्तो हो भने, अब त्यो अन्यौल हटाउन जरुरी छ।
‘समाजले अपुतो भन्ने डरले छोराको आसमा ११ पटक सुत्केरी भएँ’
०८ मङ्सिर २०७६, काडमाडौं ‘छोरा नभए अपुतो भन्ने समाजमा इज्जत जोगाउन ११ पटक सुत्केरी भएँ । तीन सन्तानको सानैमा निधन भयो । अझै छोरा जन्मिएन,’ शुभकालिका गाउँपािलका–३ की जमरा रोकायाले
अनुहारको चाउरीपन कसरी हटाउने?
०६ मंसिर २०७६, काठमाडौं कतिपयः मानिसहरु आफ्नो स्वभाविक उमेर भन्दा अगाडि नै अनुहारमा चाउरीपना देखिने गर्दछ। विशेषगरी लामो समयसम्म घाममा अनुहार देखाउदा, घामबाट बच्ने क्रिम नलगाउदा अनुहारको छाला चाउरी पर्दछ।
घुँडाको समस्या भएका व्यक्तिले भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती
०५ मंसिर २०७६, काठमाडौं घुँडा गोडाको महत्वपूर्ण जोर्नी हो। उठबस र हिँडडुलमा घुँडाकै भूमिका ठूलो हुन्छ। घुँडाको जोर्नीमा समस्या भए शारीरिक गतिविधिमै अप्ठ्यारो निम्तिन्छ। यस्तो महत्वपूर्ण घुँडामा समस्या भए केही
यसकारण जाडोमा खाइन्छ बदाम
०५ मंसिर २०७६, काठमाडौं अधिकांश मानिस जाडो मौसममा बदाम खान निकै रुचाउने गर्दछन्। जाडो मौसममा घाममा बसेर बदाम खानुको मज्जा नै बेग्लै हुने गर्दछ। बदाम खानु स्वादका हिसाबले जत्ति नै
जाडोयाममा छाला सुक्खापन हुन नदिन यसो गर्नुहोस्….
०५ मंसिर २०७६, काठमाडौं छालामा सुक्खापन हटाउन र फुटेको छाला चाँडै ठीक पार्न नियमित मोस्चराइजरको प्रयोग गर्नु उत्तम मानिन्छ। हातमा रासायनिक औषधिको साटो प्राकृतिक वस्तु प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। छालामा
कसरी स्वस्थ रहने जाडो मौसममा?
०४ मंसिर २०७६, काठमाडौं दिन–प्रतिदिन जाडो मौसमको सुरुवात पनि भइरेहको छ। जाडो मौसममा स्वस्थ रहनु नै सबैभन्दा उपयुक्त समय हो। परिवर्तित मौसमसँगै स्वास्थ्यलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन खानामा केही फेरबदल
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हुने
संवैधानिक इजलासमै सांसद शशी श्रेष्ठको प्रश्न : प्रधानमन्त्री र न्यायाधीश भेटेको सुन्नमा आयो यो के हो ?
[email protected], [email protected]artankhabar.com